फुटबलमा यसरी ब्यस्त हुँदैछ पथरीशनिश्चरे – Complete Nepali News Portal
मोरङ । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका मंसिर अन्तिम साताबाट फुटबल मय हुदैछ ।
पथरीशनिश्चरे नगरलाई यसरी फुटबलमय बनाउन पथरीशनिश्चरे फुटबल प्रिमियर लिग कमिटि लागिरहेको छ ।
खेलको पहिलो लिग चरणमा ‘ए’ पोलबाट हिमा.अस. हाइवे एफ.सी., शिखर एफ.सी., हेरिका न्यु स्टार एफ.सी., सिरिजंङ्गा एफ.सी.को प्रतिष्प्रर्धा हुनेछ ।
यसैगरी ‘बी’ पोलमा १० नबोदय एफ.सी., देविगंञ्ज एफ.सी., वाइ.जी.एफ.टी. र द रियल ब्रोदर्श एफ.सी. भिड्नेछन् । दुवै टिमबाट उच्च अंक ल्याउने दुई दुई टिम नकआउट चरण भिड्नेछन् ।
त्यस बाहेक ८ टिममा १ सय ४४ जना खेलाडी अक्सन मार्फत् क्लवले लिएर तालिम गराइरहेका छन् ।
लिग जित्न हरेक क्लवले टिम कोच नियुक्त गरेर प्रशिक्षण (क्लोज क्याम्प) सुरु गरिसकेका छन् । हिमा.अस. हाइवे फुटबल क्लवले रुपेश तामाङलाई कोचको भूमिका दिएका छन् । यो टिममा मनोज गुरुङ, असिम राई, दावा तामाङ लगायतका खेलाडी मैदानमा उत्रिने छन् ।
वाइ.जी.एफ.टी.मा कोचको भूमिका जोन सुब्बाले गरिरहेका छन् भने मन्दीप धिमाल, निर्मल एङ्देन, चेतन खतिवडा मैदानमा उत्रिने छन् । द रियल ब्रोदर्श टिमको कोच सागर कार्कीले गरिरहेका छन् भने तिर्थराज बस्नेत, अनिलकुमार चुडाल, विशाल पाण्डे लगायतका खेलाडी यहाँ रहने छन् ।
पहिलो लिग जित्न ८ वटै टिमले आफ्ना खेलाडीहरुलाई क्लोज क्याम (प्रशिक्षण) सुरु गरिरहेको छ । त्यसका लागि पथरी शनिश्चरे नगरपालिकामा रहेको ५ वटा खेल मैदानमा विहान बेलुका गरी समय मिलाएर खेलाडीहरु अभ्यारत छन् ।
पथरी रंगशालामा हिमा.अस.हाइवे टिमले तालिम गरिरहेको छ । १० नम्बर वडाको जिरिखिम्तीमा द रियल ब्रोदर्श र वाइजीएफटी टिमले बिहान बेलुका समय मिलाएर अभ्यास गरिरहेको छ । १० कै ऐयाबारी खेल मैदानमा शिखर र १० नवोदय फुटबल क्लवले प्रशिक्षण गरिरहेका छन् ।
यसैगरी देविगञ्ज र सिरिजंङ्ग फुटबल टिमले समय मिलाएर वडा नं. २ को गोलचौरी खेल मैदानमा तालिम दिइरहेका छन् । हेरिका न्यु स्टारले किर्तिपुर खेल मैदान अभ्यास गरिरहेको छ ।
नगरपालिका जस्तो सानो ठाउँमा फुटबल लिग गराउनु चुनौतीको बिषय हुँदै हो । त्यसमा लगानी गरेर खेलाडि लिनु परिहल्यो ।
पहिलो लिगमा भिड्ने ८ वटा टिम मध्ये देविगंञ्ज फुटबल क्लवमा बिरेन साँम्बा र भरत राई, शिखरमा प्रदिप फुयल र युवराज रायमाझी, सिरिजंङ्गा फुटबल क्लबमा मनोज आङ्बुहाङ्ग लिम्बु, वाइ.जी.एफ.टी.मा नवीन ढकाल र रुबिन लावतीले क्लवको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
यसैगरी हेरिका न्यु स्टारमा रोहित बास्तोला र दिवस खजुम, १० नवोदयमा संजय राई र साजन काङ्बा, हिमा.अस.हाइवे क्लबमा उज्जव बस्नेत र कैलाश श्रेष्ठ लगायतले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । यस्तै द रियल ब्रोदर्शमा संजोक चाम्लिङ राई र अर्जुन राईले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।
पथरीशनिश्चरे फुटबल प्रिमियर लिग गराउन संजिव गिरीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन भएर क्रियाशिल रहेको छ ।
समितिको सहसंयोजकमा बिक्की राई, सचिवमा मणि लुम्फुवा, कोषाध्यक्षमा नामिहाङ्ग राई रहेका छन् । सदस्यहरुमा दीपक पुलामी मगर, दीपक राई, भक्त राई, सुमन कुरुङ्बाङ्ग र रोशन मादेम्बा रहेका छन् ।